UmDyarho wokuFunda oMangalisayo kwiSekondari iKylemore | Language Centre
Posted on 03/09/2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news
Kulo nyaka, abafundi besiKolo seSekondari ePhezulu iKylemore bebenoSuku lokuBhiyozela uMandela abaya kuhlala belikhumbula. Ekunye neZiko loLwimi, amacandelo ahlukeneyo ase-SU athe achitha ixesha kwesi sikolo ngowe-25 Julayi ukunika imbeko kwilifa lembali kaNelson Mandela.
Ngolo suku, uFaika Haroun neqela loogxa bakhe abangamalungu abasebenzi kwiZiko leeLwimi bathi bafuna ukwabelana ngochulumanco lokufunda nabafundi. “Siye sacwangcisa umdyarho wokufunda ukucela umngeni nokukhuthaza abafundi ukuba bafunde ngokuqonda kwaye bakhuphisane ukufumana amabhaso.”
UmDyarho wokuFunda oMangalisayo weZiko leeLwimi ubuneendawo ezine zokungenela, kwaye njengayo yonke imidyarho, injongo yayikukugqiba kuqala. Abafundi bathi bahlulwa bangamaqela amahlanu kwaye banikwa umbhalo wokufunda kumaNgenela oku-1. Kwakufuneke baxoxe ngoko bakufundayo ukuze emva koko, njengeqela, baphendule iseti yemibuzo enxulumene nombhalo lowo. Le mibuzo ivavanywe kumaNgenela esi-2. Kuxa bethe abafundi bayiphendula ngokuchanelekileyo kuphela le mibuzo apho bangafumana umyalelo wokuqokelela into amabayithathe baye nayo kumaNgenela esi-3. Kuxa kuthe kwanxulunyaniswa le nto nomyalelo kuphela apho bangafumana umbhalo wesibini onemiyalelo kumaNgenela esi-3. KumaNgenela esi-4, ezo mpendulo ziya qinisekiswa, kwakhona, amaqela afumana imiyalelo yokugqibela xa iimpendulo zichanekile kuphela.
Emva kokufunda nzima, ukucinga ngokunzulu nokuphendula imibuzo ngokukhawulezileyo, iqela elino-Trishan liye laba lelokuqala ukufikelela emgceni. Kwindawo yesibini ibe liqela elino-Hayward, nelilandelwe liqela ebelikhokelwe ngukapteni uJustine. Amabhaso aquke izichazi-magama, iincwadi, iiseti zezinto zokubhala namaphecephece eencwadi. Ukongeza kulonwabo bekukwakho nodontso lonethamsanqa lokuphumelela. Kubafundi, lo mdyarhi ubonakalise umthethosiseko wokuba abo bafunda bekuqonda abakufundayo ekugqibeleni ngabo abaphumelelayo kwizifundo nasebomini.
Lo mdyarho uthe wenza uthakazelelelo wanenkuthazo ngakwiititshala, kwaye abanye baye bacela ukuba bangayisebenzisa le ngqikelelo xa befundisa: “Abafundi bafunda ukusebenzisana kumaqela kwaye bathe batyhileka ukuba ukufunda ngokuqondayo kubalulekile kwizifundo zabo zonke.”
“Abafundi bacinge ukuba lo mdyarho ubusonwabisa kakhulu, kwaye bathe babona ukuba ukufunda kungonwabisa kakhulu. Xa besibona ubungakanani bempumelelo yeli nyathelo, silangazelela ukuqhuba nalo mdyarho sisiya nakwezinye izikolo ngokunjalo,” ugqibe ngelitshoyo uFaika. Ungamthumelela umyalezo ngeimeyili ukuba unomdla wokuba umDyarho wokuFunda oMangalisayo uze esikolweni sakho.
Language CentreArticles in isiXhosa Dialogos Recent newsUmDyarho wokuFunda oMangalisayo kwiSekondari iKylemore